🥇 Barnaamijka dukaanka
Qiimeynta: 4.9. Tirada ururada: 704
Fiidiyowga barnaamijka dukaanka
Dalbo barnaamij dukaanka
Otomaatiga dukaanku had iyo jeer wuxuu u baahan yahay softiweer khaas ah oo khaas ah, kaas oo badanaa ka kooban dhowr barnaamij oo loo isticmaalo qaybaha kala duwan ee waxqabadkaaga. Barnaamijkeenna USU-Soft ee dukaanku waa xal dhammaystiran oo ku saabsan xisaabaadka dukaanka, marka mid ka mid ah barnaamijyada xisaabinta dukaanka lagu beddelo dhowr kale. Ma awoodi doontid inaad jimicsi ku sameyso dukaanka si sax ah haddii aadan nidaamka noocaas ah ku haysan dukaankaaga. Barnaamijkan waxaad ku arkaysaa sida ay u fududahay in macluumaadka lagu kaydiyo barnaamijka. Waxa ugu horreeya ee aad ku arki doontid barnaamijka dukaanku waa is-dhexgal aad u fudud. Halkaas kuma sameyn kartid oo keliya iibka, bixinta, amarrada alaabooyinka cusub, laakiin sidoo kale waxaad sameyn kartaa agab. Oo aad haysato qalabka wax lagu baaro, uma baahnid inaad mar dambe gacanta ku qabato. Iyada oo la adeegsanayo qalabka wax lagu dhejiyo ee loo yaqaan 'barcode scanner', isticmaalaha ayaa inta badan la soo gudboonaada dhibaatada casriyeynta. Barnaamijka xisaabinta ee dukaanka aan bixinno wuxuu taageeraa noocyo kala duwan oo iskaan ah iyo sidoo kale barcode warshad. Waxaan ikhtiraacnay warbixinno maareyn dhan ah oo aad si gooni gooni ah ugu dejisan karto barnaamijka. Khubaradeenna takhasuska leh, markaad codsato, waxay abuuri karaan warbixino dheeri ah. Iyo tan ugu muhiimsan, warbixinnada nidaamkan dukaanka waxaad awoodi doontaa inaad ku aragto oo keliya dhaqdhaqaaqa lacagta, laakiin sidoo kale dhammaan dhaqdhaqaaqa alaabada, iyo sidoo kale warbixinnada ku saabsan shaqada shaqaalaha. Ku samee xisaab celin dhammaystiran dukaanka adoo adeegsanaya codsigan xisaabinta!
Maxaa diidaya inaad ku tiirsanaato barnaamijyada bilaashka ah ee lagu xayeysiiyo internetka tiro aad u tiro badan? Waxaa jira sababo badan, laakiin waxaan jeclaan lahayn inaan ka sheegno kuwa ugu muhiimsan. Marka hore, waa wax aad u adag, oo xitaa aan macquul aheyn, in nidaamyada noocan oo kale ah ay run ahaan xor noqon doonaan. Ma jiro barnaamij-bixiye waqti iyo dadaal ku bixin doona sidii uu u abuuri lahaa nidaam noocan oo kale ah oo dukaanku siinayo qof bilaash ah. Qof kasta oo u helaa barnaamij xisaabeed adag oo dukaanku u baahan yahay xiriir joogto ah oo ku saabsan nidaamka taageerada si loo xalliyo arrimo kala duwan. Ka dibna xilligan abuurayaasha barnaamijka maaraynta dukaanku iyo xisaabinta tayada, oo ay ahayd inay bilaash ahaato, waxay dalbanayaan lacag si ay kuu siiso adiga shaqooyinka qaarkood waxayna kuu soo baxaysaa in nooca aad "nasiibka u lahayd" inaad soo dejiso uusan dhammaystirnayn, laakiin kaliya demo. Waxaa laguu balanqaaday nidaam bilaash ah, waxayna soo baxday inaadan helin dhamaadka. Waa inaadan iskaashi la yeelan shirkad kugu khiyaanaysa adeegsiga wax soo saarkeeda. Waxaan bixinaa heshiis gebi ahaanba hufan oo daacad ah - ka hor intaadan sameyn go'aan muhiim ah sida doorashada barnaamij dukaanka ah, iskuday nooca demo - waad ku soo dejisan kartaa boggayaga rasmiga ah. Haddii aadan ku qanacsanayn wax, nala soo socodsii. Waxaan ku faraxsanahay inaan saxno oo aan helno waxa kugu habboon adiga.
Waxaan u furan nahay dalabyo cusub mar walbana waan ku faraxsanahay inaan tijaabino wax cusub. Marka labaad, waxaan kuu sheegaynaa xaqiiqo la xaqiijiyey - barnaamijyada dukaanka noocan ah, oo laga soo dejiyey lacag la'aan, 100% aan dhammaystirnayn, aan dhammaystirnayn, waxaa ku jira khaladaad badan oo sinnaba uma dammaanad qaadi karto amniga xogtaada. Barnaamijyada noocan oo kale ah ee xisaabaadka iyo maaraynta dukaamadu waxay dhaawac weyn u geysan doonaan shaqada meheraddaada, waxay u horseedi doonaan cilado, fashilaadyo aakhirkiina waxay kuu horseedi doonaan inay burburaan dhammaan dadaalladiina, waqtigiina iyo lacagtiinna oo aad ku bixiseen inaad ku dhisto ganacsi guuleystay. Si looga hortago inay taasi dhacdo, ha ku dhicin dhibbanaha farmaajo bilaashka ah ee mousetrap-ka, oo si toos ah ugu tag xirfadleyda. Waxaan diyaarinay nidaam u gaar ah oo kor u qaadi doona shaqada dukaankaaga, ilaalin doona xogtaada oo sinnaba u horseedi doonin wax xun. Xusuusnow sida ay muhiimka u tahay doorashada saxda ah.
Nidaamka dukaanka waxaa loogu talagalay inay u adeegsadaan yar iyo dhexdhexaad labadaba iyo xitaa in ka sii badan ganacsiyada waaweyn. Shaqo kasta oo si uun xiriir ula leh ganacsiga waxay u baahan tahay otomaatig ahaan xog aad u tiro badan. Barnaamijka otomatiga iyo maaraynta dukaanku waa barnaamij gebi ahaanba jiil cusub. Looma baahna haba yaraatee in lagu faano hal-abuurnimada noocaas ah hortooda kuwa kula tartamaya. Marka hore habee nidaamka shaqada, nidaaminta xogta, xakamaynta iibka iyo alaabada. Hadana, haku faanin barnaamij cusub oo otomaatig ah iyo casriyayn ah oo aad rakibtay, laakiin waxaad ku faantaa natiijada lagu gaadhay waqti aad u gaaban. Waanu dammaanad qaadaynaa. Nidaamkan, waxaad ku abuuri kartaa qaab-dhismeedka meheraddaada, kaas oo soo bandhigi doona oo falanqeyn doona xog aad u tiro badan, isagoo siinaya warbixinno sax ah iyo natiijooyin sax ah.
Hawsheennu waa inaan kaa farxinno. Taasi waa sababta aan u dhaafi weynay dadaal, macnaheedu maahan inaan abuurno barnaamijkeena gaarka ah. Adoo adeegsanaya, waxaad arki doontaa inaan nafteena ku maalgelinay barnaamijkan si aan uga dhigno sida ugu fudud ee loo isticmaali karo intii suurtagal ah, si sahlan loo barto, oo hodan ku ah shaqeynta. Barnaamijka dukaanku si wanaagsan ayuu u shaqeeyaa mana u horseedo guuldarooyin ama khaladaad. Sannado badan oo aan ku jirnay suuqa, ma aanan helin hal cabasho. Tani waa tilmaame tayo leh. Waan ka mahadcelineynaa in macaamiisheenu ay na doorteen, sidaa darteed waxaan daryeeleynaa arrimo kasta oo waxaan siinnaa tayada ugu sareysa ee taageerada farsamo. Haddii aad rabto inaad ka mid noqoto macaamiisheena, booqo degelkeenna, wax noo soo qor, iskuna day inaad rakibto nooc demo oo bilaash ah. Waxaan kaa caawinaa sidii aad otomaatig ugu noqon lahayd ganacsigaaga!
Codsiga maamulka dukaanka waxaa lagu magacaabi karaa mid caalami ah. Waxaa jira noocyo kala duwan oo barnaamijka ah. Taas ka sokow, waxaa jira luuqado badan oo barnaamijka lagu turjumay. Natiijo ahaan, wax dhibaato ah kuma lahan isticmaalka nidaamka dalal kasta. Waqtigan xaadirka ah, waxa kaliya ee u haray hay'adaada ganacsiga inay sameyso waa inay isku dayaan arjiga oo ay ku rakibaan si ay ugu arkaan ficil ahaan. Faa'iidooyinka ku furaya hortaada ayaa la hubaa inay kaa yaabi doonaan.
Dukaammada iyo ganacsiga
Xisaabinta iibka alaabada
Xisaabaadka alaabada iyo adeegyada
Xisaabinta badeecada ku jirta
Xisaabaadka alaabada ee bakhaarka
Xisaabinta badeecadaha ganacsiga
Barnaamijka xisaabaadka ee dukaanka
Barnaamijka xisaabinta alaabta
Sidee loo hayaa diiwaannada alaabada?
Barnaamijka xisaabinta alaabada
Barnaamij xisaabinta bakhaarka
Barnaamij loogu talagalay dukaanka tafaariiqda
Barnaamij iibinta alaabada
Barnaamij loogu talagalay baaraha
Soo iibsiga xisaabinta
Qalabka tafaariiqda dukaamada
Software loogu talagalay ganacsiga
Bakhaar otomaatig ah
Barnaamijka xisaabinta ganacsiga
Barnaamijka maaraynta ganacsiga